DAAWO VIDEO DEG DEG : Maxamed Bakaal oo Ogadeen Ahaan Dartiisa Maxamed BK Gurigisa Ku Weeraray - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO DEG DEG : Maxamed Bakaal oo Ogadeen Ahaan Dartiisa Maxamed BK Gurigisa Ku Weeraray
DAAWO VIDEO DEG DEG : Maxamed Bakaal oo Ogadeen Ahaan Dartiisa Maxamed BK Gurigisa Ku Weeraray
July 22, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland 5
Xalay Xili Saq Dhexe Aheeyd Fanaanka Maxamed Bakaal Ciro Oo Xalay Kooxo Hubeeysan Dhaawac Ugu Geesteen Guriguu Ka Dagan Yahay Magaalada Hargeysa Fanaanka Maxamed Bakaal Cirro Oo Dilkiisa Loo Aaneeyay Xafladi Maxamed Bk Looga Joojiyay Nairobi Kenya.
Fanaanka Waxaa Loo Dilay Qoraal Hees Aheeyd Oo Uu Cabdiraxman Oday Uu Soodhigay Bartiisa Facebook Uu Waliba Ku Metion Gareeyay Asagoo Leh Sxb Cirro Laxan iisoo Saar Heestan Adigaa Laxamiiste ii Ahee Sidaa Awgeeyd Cirro Xalay Dhaawac Halis Ahbaa Loogeestay Hadeysan Cunsuri Nimo Jirin Cabdiraxman Oday Ayaa Erayada Keenay Oo Facebookiisa Soodhigay Ee Maxaa Asaga Loo Dili Waayay Ama Waa Nin Isaaq Ah?
RIIX VIDEO HOOS KA MUUQD SI AAD U DAAWATO
ismaacil cabdi Maxamed says:
Bk anigu kuma dhahaayo waxaad ahay cumsuri lakiin Waxaan ku Lee yahay sharafta allaha kaanqaado
Maroore ayaaaba lagaa qaadaye
Iska hadlow ina igare ciro gurigiisu ayuu gaafane kucunayaa
belona ma jidho.
Halkaad warkan ka keentay adaa sheegi.
Waar hargeysa xataa nin ajnabi ah
hadaad ilxun ku eegto waa lagugu qailinayaa.
Saa waa ciro oo reer hargeysa ah
War hooy arrimuhu heerarka ay u kala seeran yihiin ha loo kala saaro. Waa heer bulshood, heer suugaaneed iyo heer siyaasadeed. Labada ugu horreeya waa muqaddas la ma taabtaan ah oo ka sarreefan kan saddexaad.
Hargeysa iyo Woqooyi Galbeed sida ay Isaaqu u leeyihiin ayay Daaroodku na u leeyihiin. Magacyadan guud ee qabiillada ka sokoow dadkani waa ehel iyo qaraabo aan waxba kala ahayn oo meel na kala jirin.
In sooyaalkan muqaddaska ah la siyaasadeeyo waxaan u arkaa saqajaannimo iyo wax aan dhaqan iyo caado toona inoo ahayn. Dibjir jaahil ah oo laab lakac lehi meel kasta waa buux laakiin waa in aanay bulshaweynta cod ku dhex yaalanin.
Waxaan ku kalsoonahay in ciddii magaca Isaaq cid kale Hargeysa ugu dhibaateysa abaalkeeda degdeg looga marinayo. Waa se in saqajaannimadan baraha bulshada laga caadeystay laga bannadaa dhaqankeena iyo bulshaweynteena.
Waa iska cadahay sida dayaxa, inay tahay bk waxa ku lug leeyahay waayo maxaa kulan siiyey , cunsuriyada Reed majnuunland is increasing, you guys open your eyes , reerka waa desperate for real.
Waa sidaa aad shegtay dadku waa xigaal,xidid,iyo gacal
Waxani waa huuha baraha bulshada
lagu faafiyo oo dad daciifin ahi
I arkaay imaqlaay ishare gareeyay
Waar waxaa waa horaa laga gudbay